नेपालमै पहिलो पटक, ५ केजीको बच्चा ज न्मियो; महान आमा, लाई सलाम… - Sansar Dainik
August 11, 2020 adminLeaveaComment on नेपालमै पहिलो पटक, ५ केजीको बच्चा ज न्मियो; महान आमा, लाई सलाम…
Homeनेपालमै पहिलो पटक, ५ केजीको बच्चा ज न्मियो; महान आमा, लाई सलाम…
August 11, 2020 Admin1Leave A CommentOn नेपालमै पहिलो पटक, ५ केजीको बच्चा ज न्मियो; महान आमा, लाई सलाम…
भरतपुरस्थित चितवन मेडिकल कलेजमा एक महिलाले ५ किलो ५० ग्राम तौलको बच्चालाई ज न्म दिएकी छन्।
मकवानपुरको हेटौंडा उपमहानगरपालिका–१५ शिखरपानीकी ३० वर्षीया सिता लोप्चन डिम्डुङ आइतबार स्वास्थ्य जाँ चका लागि अस्पताल आइपुगेकी थिइन्। त त्कालै भि डियो एक्स-रे गर्दा बच्चाको तौल साढे ४ किलोभन्दा बढी देखिएपछि चिकित्सकहरुले श ल्यक्रि या गर्नुपर्ने निर्णय गरेका थिए।
सोमबार विहान करिब ९ बजे श ल्यक्रि यामार्फत बच्चा (छोरी) लाई जन्म दिएको अस्पतालका स्त्री तथा प्र सुती रो ग वि शेषज्ञ डा. वसन्त शर्माले जानकारी दिए। डा. वन्दना खनाल, डा. प्रेक्षा सिंह र डा. रेनुका ताम्राकारसहितको टोलीले श ल्यक्रि या गरेको थियो।
डा. शर्माकाअनुसार भिडियो एक्स–रे गर्दा साढे ४ किलो भन्दा बढी तौलको बच्चा देखिए श ल्यक्रिया गर्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता छ। आमा र बच्चा दुवैको स्वास्थ्य अवस्था राम्रो छ।
करिब ५ वर्षदेखि उक्त अस्पतालमा काम गर्दै आएका डा. शर्माले यति धेरै तौ लको बच्चा अहिले सम्म नदेखेको बताए। ‘यसअघि ४ किलो आठ सय ग्रामसम्मका बच्चा त देखेको हो तर ५ किलो भन्दा बढी तौल भएको बच्चा त पहिलो पटक देखियो’, उनले भने।**
पुरुषको यी ५ ब्यक्तित्व जसमा महिला मरिमेट्छन्
“यी हुन् श्रीमतीका ७ प्रकार, तपाईंको श्रीमती कुन वर्गकी” ?
विवाह भएको ९ वर्ष भइसकेको थियो, बि’रामी भएपछि थाहा पाइन् उनी महिला होइन पुरुष रहिछिन्
जानी राखौ यस्तो बेला महिलालाई सा’रीरीक चा’हना बढी हुन्छ !
अनुहारका पूराना भन्दा पूराना दाग-धब्बा हटाउन निकै प्रभावकारी हुन्छ मह, यसरी प्रयोग गर्नुहोस् !